Efa fanao nanomboka ny taon-dasa izy io, hoy ny depioten’ny boriborintany fahenina, Todisoa Andriamampandry ary efa miisa 200 ankehitriny ireo nisoratra anarana ho amin’izany ka ny 30 septambra izao no vita ny taranja rehetra.
Tsy azo iainana intsony ny fitohanan’ny fiara eto Antananarivo aterak’ity fanamboaran-dalana manerana ireo fokontany ity. Misy mihitsy ireo fiara mpitati-bahoaka manararaotra manova lalana sy mampiakatra ny sarany avo roa heny.
Eo amin’izay resaka fitohanana izay indrindra dia nangaina toa tsy nisy mpiahy mihitsy ireo mpiandry taksibe ho eny Paraky sy Ankadimbahoaka iny omaly satria dia tsy hitan’izy ireo izay azo atao manoloana ny fanapahan-kevitr’ireo mpitatitra hanova ny lalany ho any Tsimbazaza. Fanampin’izay, tsy nisy saran-dalana ambanin’ny 1000 ariary navelan’izy ireo niditra ny fiara.